शिक्षा र स्वास्थ्यको लात ~ brazesh
शिक्षा र स्वास्थ्यको लात
July 31, 2010 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
कुनै पनि समृद्ध राज्यको निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरू धेरै हुन्छन् । ससानादेखि ठूल्ठूलासम्म निकै कुराहरूका सामूहिक नतिजाले राज्यलाई बनाउने वा बिगार्नेमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । तीमध्ये पनि महत्त्वपूर्ण केही कुराहरू हुन्छन्, जसले कुनै पनि देशका नागरकिलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्छन्, प्रभावित गर्छन् । देश के बन्छ, कस्तो बन्छ र कुन दिशामा हिँड्छ भन्ने कुरा त्यहाँका जनताको मानसिकता, विवेक अनि शारीरकि अवस्थाले निकै हदसम्म निर्धारण गर्छ । अनि, तिनका लागि आधारभूत कुरा हो शिक्षा र स्वास्थ्य । तर, दुर्भाग्यको कुरा यी दुवै कुरामा हामी संवेदनशील देखिँदैनौँ । धेरै हदसम्म यो हाम्रो बाध्यता हो ।
केही समयअघिका दुईवटा सन्दर्भ यहाँनिर उल्लेख गर्नलायक छन् । एक जना आफन्तको असामयिक र अचानक निधन भयो । उनलाई कुनै रोग थिएन, उनको उमेर पनि धेरै थिएन । स्वस्थ, हँसिला, परििचतहरूका माझमा लोकपि्रय ती मानिसका अचानक दुईवटै मिर्गौला, त्यसपछि कलेजो हुँदै मस्ितष्कका स्नायुहरूले काम गर्न छाडे । केही दिनसम्म सघन उपचार कक्षमा भेन्टिलेटरमा राखेर धाने पनि अन्ततः कसैको केही लागेन । भएको कुरा साधारण मात्र रहेछ । उनलाई साधारण ज्वरो आएका कारण घरनजिकैको एउटा अस्पतालमा जँचाउन लगियो । त्यहाँका डाक्टरहरूले साधारण रुघाखोकीको ज्वरोका रूपमा औषधी दिएर उनलाई पठाए । दुई दिनसम्म फाइदा नभएपछि अर्को अस्पतालमा लगेपछि उनको रगत जाँच गर्दा थाहा भएछ, पहिले नै त्यसो गरेको भए साधारण उपचारले उनी ठीक हुने रहेछन् । औषधी विज्ञानको भाषामा 'सेप्सिस' भनिने एक किसिमको ब्याक्टेरयिल संक्रमण रगतमा फैलिएका कारण उनलाई बचाउन सम्भव नभएको रहेछ । क्यान्सर र एड्सपछि संसारमा सबैभन्दा बढी मान्छेलाई मार्ने यो संक्रमण साधारणतया २४ देखि ६० वर्षका मान्छेहरूलाई हुनसक्ने रहेछ । उच्च ज्वरोमा रगत परीक्षण हुँदा सुरुमा थाहा भयो भने साधारण औषधीले त्यसलाई ठीक पार्दो रहेछ । हामी स्वास्थ्यको कुरामा चाहिनेभन्दा बढी हेलचेक्र्याइँ गर्छौं । हामीहरू डाक्टरकहाँ गयो भने 'यो गर र ऊ गर' भनेर बेकारमा नचाहिने खर्च गराउँछन् भन्ने मान्यता राख्छौँ ।
यो निकै हदसम्म सही कुरा पनि हो । स्वास्थ्यमा यति धेरै व्यापारीकरण भएको छ, त्यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा दिनानुदिन महँगो हुँदै गएको छ । यसले गर्दा एउटा सामान्य मान्छेलाई अलिकति गम्भीर रोग लाग्यो भने उपचार गर्नु असम्भवजस्तै हुन थालेको छ । सरकारी, अर्धसरकारी अस्पतालहरूको सेवाको स्िथति मायालाग्दो र डरलाग्दो भइसकेको छ । दक्ष चिकित्सकहरू पैसा कमाउनेमा बढी रुचि राख्छन् । फलतः आर्थिक स्िथति कमजोर हुनेहरूलाई गम्भीर रोग लाग्यो भने उससँग कुनै उपाय नै बाँकी रहँदैन । व्यापारलाई पहिलो मन्त्र मानेर खुलेका नर्सिङ्होम, अस्पताल र पढाइमा भएको खर्च चाँडोभन्दा चाँडो उठाउने प्रयासमा लागेका डाक्टरहरूले अनावश्यक खर्च गराउँदैनन् भनेर पनि भन्न सकिन्न । त्यसैले साधारण ज्वरोलाई घरेलु उपचार गरेर या आफँैले एन्टिबायोटिक किनेर खाएर तंगि्रने थुप्रै मान्छेहरूको बानी हुन्छ । तर, यो बानी खतरनाक हुन सक्दो रहेछ । ती आफन्त त एउटा सामुदायिक अस्पतालमा नै जाँदा पनि उनको त्यो हविगत भयो भने आफैँले जान्ने भएर उपचार गर्न खोज्दा जे पनि हुनसक्छ । तर, बाध्यताले हामीलाई यस्ता अनावश्यक जोखिम मोल्न लगाउँछ ।
व्यापारीकरणको अर्को चर्को उदाहरण शिक्षा क्षेत्रमा देखिन्छ । गतिलो र स्तरीय शिक्षा दिने नाममा आफ्नो 'ब्रान्ड भ्याल्यु' बनाएको भरमा निजी कलेज र विद्यालयहरूले ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । त्यसैबाट दिग्भ्रमित भएर अभिभावकहरू सकी-नसकी, खाइ-नखाइ आफ्ना सन्तानलाई असली शिक्षा दिने नाममा बलिको बोका रेटिएजस्तो रेटिइरहेका छन् । फलानो विद्यालय वा कलेजमा सन्तान पढ्नु भनेको धाकजस्तो बनिसकेको छ । तर, नाम ठूलो भएका कतिपय विद्यालयहरूले जवाफ दिन नसक्ने कुरा के हो भने, एसएलसीमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीहरू किन जहिले पनि काठमाडौँबाहिरका, नाम नचलेका वा सरकारी विद्यालयका नै हुन्छन् त ? व्यापारीकरण गरएिका यी विद्यालयहरूले ठटाउने चर्को शुल्कप्रति उनीहरूको उत्तरदायित्व छ कि छैन त ? विभिन्न बहानामा हुने हडतालका कारण महिनौँ दिन बन्द भएको बेलामा समेत यातायात र खानाको शुल्क ठटाउन भने नछोड्ने विद्यालयहरू र आफ्नै जिम्मेवारीमा सवारीसाधन पार्किङ् भनेर शुल्क उठाउनेहरूमा कुनै भिन्नता हुँदैन । तर पनि अभिभावक नामक कामधेनु गाई चुपचाप बिहानै-बेलुका दुहिनबाहेक केही गर्न सक्दैन ।
शिक्षाको व्यापार कतिसम्म भइरहेको छ भन्ने कुरा एसएलसीपश्चात् कलेजहरूले गर्ने आक्रामक, आधारहीन विज्ञापन र विद्यार्थीहरूका लागि गर्ने हारालुछबाट नै त्यसको दह्रो प्रमाण पाइन्छ । राम्रो अंक ल्याएको विद्यार्थी कुनै कलेजमा बुझ्नका लागि मात्र जाँदा पनि उसको फोटो खिचेर भोलिपल्ट आफ्नो कलेजको विज्ञापनमा प्रयोग भएका घटनाहरूले पनि यिनीहरूको मानसिकता दर्शाउँछ । एउटा कलेजले आफ्नो सल्लाहकारका नाममा कुनै एक वरष्िठ प्राज्ञ र बुद्धिजीवीको नाम र फोटो छापेको भोलिपल्ट तिनले आफ्नो त्यहाँ संलग्नता नभएको खण्डन नै जारी गर्नुपरेको थियो । बदमासीको यसभन्दा ठूलो उदाहरण अरू हुनै सक्दैन । शिक्षाका नाममा कुम्ल्याउन पल्केकाहरूको होडबाजी देख्दा विमानस्थल र बसपार्कमा यात्रुहरूलाई आफ्नो गाडी र होटलमा तान्नका लागि तँछाडमछाड गर्ने दलालहरूसँग तिनलाई दाँज्न सकिन्छ । कुनै निश्चित भौतिक पूर्वाधारका मापदण्डसमेत नभएकाहरूले पनि लाजै नमानी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिने दाबी गररिहेका हुन्छन् ।
अनि, हामी यस्तो वातावरणमा पौडिँदै समृद्ध र समुन्नत नयाँ नेपालको सपनामा रमाउन बाध्य छौँ ।